आज असोज २८ गते बुधबार, कुन राशिलाई कति शुभ? हेर्नुहोस दैनिक राशिफल! – Everest Pati
आफ्नो उग्र स्वभावमा संयम राख्नुहोला। शारीरिक र मानसिक रूपले अस्वस्थताको अनुभव हुनेछ। कडा परिश्रम पश्चात पनि, थोरै सफलता हासिल हुनेछ। पेट सम्बन्धि समस्या देखा पर्न सक्छ। सरकारी काममा सफलता मिल्नेछ। कार्यक्षेत्रमा कार्यभार तथा जिम्मेवारी बढ्नेछ।
माइती पक्षबाट लाभदायक समाचारहरू प्राप्त हुनेछन्। विद्यार्थी वर्गको लागि समय शुभ रहनेछ। सरकारी क्षेत्रमा लाभ र आर्थिक व्यवहारमा सफलता प्राप्त हुनेछ। शारीरिक तथा मानसिक रूपले तपाईं स्वस्थ रहनुहुनेछ। परिवारमा सुख-शान्तिमय वातावरण रहनेछ।
सरकारबाट लाभ मिल्ने सम्भावना छ। यात्राको योग बन्ने देखिन्छ। साथी-भाई तथा आफन्तसँग मनमुटावको स्थिति उत्पन्न हुनसक्छ। प्रतिस्पर्धीहरु माथि विजय प्राप्त हुनेछ। आर्थिक दृष्टिकोणबाट भने यस दिन सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। कार्यक्षेत्रमा परिस्थिति अनुकूल रहनेछ।
स्वास्थ्यमा समस्या देखिन सक्छ, विशेषगरी आँखा सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्छ। परिवारमा वातावरण राम्रो रहने देखिंदैन। अत्याधिक खर्च हुनाले आर्थिक समस्याले सताउन सक्छ। विद्यार्थी वर्गले चाहेको जस्तो सफलता प्राप्त गर्न असफल रहलान्।
नयाँ कार्य सुरु गर्नको लागि दिन शुभ रहनेछ। बुबाबाट लाभ मिल्ने सम्भावना रहेको छ। सामाजिक क्षेत्रमा मान-सम्मान बढ्नेछ। वाणी तथा क्रोधमा असमयम राख्नुहोला। स्वास्थ्य सामान्य रहनेछ। परिवारमा सुख-शान्तिमय वातावरण रहनेछ।
अनावश्यक वाद-विवादमा नपर्नुहोला। चोट-पटक लाग्न सक्ने हुँदा ध्यान राख्नुहोला। आफन्तसँग वैचारिक रूपमा मनमुटाव हुनसक्छ। धार्मिक कार्यमा धन खर्च हुनेछ। स्वास्थ्यमा समस्या आउनसक्छ, ध्यान दिनुहोला। उग्र स्वभावको कारण समस्या आइपर्न सक्छ।
तपाईंको लागि यस दिन शुभ फलदायी रहनेछ। विभिन्न क्षेत्रमा लाभ मिल्नाले मन प्रशन्न रहनेछ। आयमा वृद्धि हुनेछ। स्वादिष्ट एवम उत्तम भोजनको अवसर मिल्नेछ। रमणीय यात्राको योग बन्नेछ। जीवनसाथीसँग निकटता बढ्नेछ। स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ।
व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा असामय अनुकूल रहनेछ। करयक्षेत्रमा उच्च पदाधिकारी तपाईंसँग प्रशन्न रहनेछन्। मान-प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। पदोन्नतीको योग रहेको छ। गृहस्थजीवन सुखमय रूपले बित्नेछ। स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। सन्तानबाट शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ।
नयाँ कार्य सुरु गर्नको लागि दिन शुभ छैन। व्यापार व्यवसायमा समय प्रतिकूल रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा पनि उच्च पदाधिकारीसँग मनमुटावको स्थिति आउनसक्छ। मनमा नकारात्मक भावना उत्पन्न हुनसक्छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखा पर्न सक्छ। मानसिक तनाब बढ्नेछ।
आकस्मिक धन खर्च हुनेछ। खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला। क्रोधमा संयम राख्नुहोला। मनमा नकारात्मक भावना उत्पन्न हुनसक्छ। सरकारी क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा परिस्थिति अनुकूल रहनेछ। यात्राको योग बन्नेछ।
तपाईंको मनोबल तथा आत्मविश्वास बढ्नेछ। यात्राको योग बन्नेछ। स्वादिष्ट एवम उत्तम भोजन तथा नयाँ वस्त्र मिल्नेछ। वाहन सुख प्राप्त हुनेछ। साझेदारहरुबाट लाभ प्राप्त हुनेछ। स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। परिवारमा सुख-शान्तिमय वातावरण रहनेछ।
स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। परिवारमा सुख-शान्तिमय वातावरण कायम रहनेछ। शत्रु तथा प्रतिस्पर्धी पराजित हुनेछन्। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा समय अनुकूल रहनेछ। वाणीमा संयम राख्नुहोला। कार्यक्षेत्रमा परिस्थिति अनुकूल रहनेछ।
विश्वकप छनोटमा ब्राजिलको उत्कृष्ट जित, नेइमारको ह्याट्रिक